သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): August 2011
"ဟာ.. မောင်ပေါက်ကျော်၊ မတွေ့တာ အတော်လေး ကြာသွားပြီကော"
"ဟုတ်တယ် သူကြီးမင်း၊ မတွေ့ဆို ကျနော်လဲ အလုပ်များနေလို့"
"ဘာတွေ လုပ်နေတာတုန်း မောင်ပေါက်ကျော်ရ"
"ဘာရယ်လုိ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး သူကြီးမင်း၊ ပေါ်ကာဒေး ပွဲတွေ လိုက်စားနေလို့"
"ဘယ်လို ဘယ်လို မောင်ပေါက်ကျော်၊ ပြန်ပြောစမ်းပါဦး"
"ဟာ... သူကြီးမင်းကလဲ၊ ခေတ်နောက်ကျလိုက်တာ။ အိမ်သာနက်ထဲမှာ ပေါ်ကာဒေး ပွဲတော်ကြီး ကျင်းပနေတာ မသိဘူးလား။ ဒီနေ့ (သြဂုတ် ၃၁)မှာ တကယ့်ပွဲတော်ကြီးလေ"
"မောင်ပေါက်ကျော်.. မင်းလုပ်လုပ်မှ ဘလော့ဂါတွေအားလုံး ဖဲသမားတွေ ဖြစ်ကုန်ရော့မယ်။ ဘယ့်နှယ် ပေါ်ကာဒေးရမှာလဲကွ။ ဘလော့ဂါဒေးပါ။ ပြီးတော့ အိမ်သာနက် မဟုတ်ဘူး။ အင်တာနက်။ အင်တာနက်။ မင်းကတော့ အမှားတော်တော်ကောင်း"
"သိဘူးလေဗျာ။ ကျနော်က နားစွန်နားဖျားဘဲ ကြားခဲ့တဲ့ ဥစ္စာ။ သူကြီးမင်း သိတဲ့အတိုင်းဘဲလေ။ ကျနော်တို့ တုံးဖလားရွာမှာ ဘလော့ဂါတွေရော ဘလော့ချာတွေရော ဘလော့နာတွေရော တစ်ယောက်တစ်လေလေးတောင် ရှိမှ မရှိကြတာဘဲကို။ ပြီးတော့ အင်တာနက်ဆိုတာကြီးကလဲ စိတ်ထဲမှတ်ရ အရမ်းခက်တယ်။ ဒါကြောင့် လွယ်လင့်တကူဘဲ အိမ်သာနဲ့ တွဲမှတ်ထားမိတဲ့အတွက် အိမ်သာနက်လို့ ဖြစ်သွားတာပါ"
"မင်းပြောမှဘဲ ငါ ကိုရင်ပေါက်စ ဘ၀ကို အမှတ်ရသွားမိတယ်။ ပေါ်ကာဒေး ကျင်းပခဲ့ကြတာ။ အဲ... ပေါ်ကာ ဆွဲကစားခဲ့ကြတာလေ"
"ဟာ... စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ။ ဆက်ပြောပါ သူကြီးမင်း"
"မင်း မပြောခိုင်းလဲ ပြောမှာပါဘဲ။ ပြောဖို့ နိဒါန်းချီနေတဲ့ ဥစ္စာ"
"ဟဲ.. ဟဲ... သူကြီးမင်းကတော့ တစ်နေ့ တစ်မျိုး မရိုးရဘူး။ ဆက်ပြောပါ သူကြီးမင်း။ ကျနော်ကတော့ အပါးတော်မြဲမှာ နားတော်စွဲလျှက် ရှိကြောင်းပါဗျားးး"
"အေးကွာ... ငါ ကိုရင်ပေါက်စ ဘ၀တုန်းက ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ဖဲကစားတတ်လာမှန်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ ပေါ်ကာတို့ ကိုးမီးတို့ တွမ်တီးဝမ်းတို့ အကုန် ကစားတတ်တယ်။ ကိုရင်ကျောင်းသားတွေ ကြားထဲမှာ ဖဲကစားခြင်း အနုပညာဟာ မသင်ရပါဘဲ တွင်ကျယ်ထင်ရှားလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးက လုံးဝ မကြိုက်ဘူး။ ဖဲကစားတာမိရင် ကြိမ်လုံးစာ မိဖို့သာ ပြင်ပေတော့ဘဲ"
"ဒါဖြင့် သူကြီးမင်းကော ကြိမ်လုံးစာ မမိခဲ့ဖူးဘူးလား"
"မမိခဲ့ဘဲ နေပါ့မလားကွာ။ ကိုရင်ကျောင်းသားနဲ့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးကြားမှာ ကြိမ်ဖူးဟင်း ကျွေးခြင်း ကြိမ်ဖူးဟင်းစားခြင်း အနုပညာက ထုံးစံကြီးဘဲကို "
"အင်း... အဲဒီ အနုပညာက ကြောက်စရာကြီးပါလား"
"မကြောက်ပေါင် မောင်ပေါက်ကျော်။ မကြောက်လို့လဲ သိသိကြီးနဲ့ မိုက်ကြတာလေကွာ။ တစ်နေ့မှာ ငါရယ် တစ်ခြား ကိုရင်နှစ်ပါးရယ်၊ ကျောင်းသားကြီးတစ်ယောက်ရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ဦးဇင်းတစ်ပါးရယ် ဆွမ်းစားကျောင်းက အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ ပေါ်ကာ ကစားနေကြတယ်။ အဲဒီ ဦးဇင်းဘွဲ့တော်က ဦးမုနိန္ဒတဲ့။ ငါးယောက် ငါးအိမ်ပြည့် ကစားကြတာပေါ့ကွာ။ ဘာတမ်းညာတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နဖူးမှာ အိုးမဲခွေတမ်းလောက်ပါဘဲ။ ငါးယောက်လုံး တစ်လှည့်စီ ရှုံးကြတာဆိုတော့ နဖူးထိပ်မှာ အိုးမဲခွေ ကိုယ်စီတွေနဲ့ပေါ့"
"ဒါဖြင့် သူကြီးမင်း နဖူးထိပ်မှာလဲ အိုးမဲခွေကြီးနဲ့ပေါ့"
"မင်းကလဲ ငါးယောက်လုံးဆိုမှတော့ ငါလဲ ပါရောပေါ့ကွာ"
"ဟဲ ဟဲ အခုနေ ပုံဖော်ကြည့်ရင် ရယ်စရာကြီး ဖြစ်နေလို့"
"အင်း..... ဟုတ်မယ်။ အခုနေ ပုံဖော်ကြည့်ရင်တော့ ရယ်ချင်စရာကြီးပေါ့ကွာ။ အဲဒီတုန်းကတော့ မရယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး"
"ပေါ်ကာ ဆွဲတာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့ မိသွားလို့"
"ဟင်.... ဟုတ်လား သူကြီးမင်း"
"အင်း... နေရာတိုင်းမှာ သစ္စာဖောက်တွေက များပါဘိသနဲ့။ ဘယ်ကိုရင်က တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဘုန်းကြီးကို သွားတိုင်လဲ မသိပါဘူး။ ဘုန်းကြီးက ငါတို့ ပေါ်ကာဆွဲကစားနေတဲ့ ဆွမ်းစားကျောင်းပေါ် ဒိန်းဒိန်းဒိန်းဆိုပြီး တက်လာတယ်။ ငါတို့လဲ ဟာ ဆရာလာပြီဆိုပြီး ဖဲချပ်တွေကို စုပြီး ဖွက်လိုက်တာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမဲ့လဲ ကလေးအတွေးဆိုတော့ လုံအောင် ဘယ်ဖွက်နိုင်ပါ့မလဲ။ ဖဲချပ်တွေ စုပြီးထပ်ထားတဲ့ ဖဲထုပ်ကြီးကို ငါတို့ ၀ိုင်းထိုင်နေတဲ့ ဖျာအောက်ကို ထိုးထားလိုက်တာကိုး။ ဖျာကြီးက မို့မို့မောက်မောက်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ နဖူးက အိုးမဲခွေတွေကိုလဲ လက်ဖ၀ါးနဲ့ ပွတ်ပြီး အမြန်ဖျက်လိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပျက်မသွားပါဘူး။ ပျံ့ဘဲ ပျံ့သွားတာ။ ရယ်စရာကြီး။ ဘုန်းကြီးက မေးတယ်။ မင်းတို့ ဘာလုပ်နေကြတာလဲတဲ့။ စကားပြောနေကြတာ ဆရာလို့ ဖြေလိုက်ကြတယ်။ အဲဒီ ဖျာအောက်က ဘာကြီးလဲတဲ့။ ထုတ်ပြစမ်းတဲ့။ လက်တုန်တုန်နဲ့ ထုတ်ပြလိုက်ရတယ်။ ဖဲထုပ်ကြီး အထင်းသား ပေါ်လာတယ်။ ဘုန်းကြီးလက်ထဲ ချက်ချင်း ရောက်သွားတယ်။ ဘုန်းကြီးက ထပ်ပြောတယ်။ မင်းတို့အားလုံး မတ်တပ်ထစမ်းတဲ့။ ငါတို့အားလုံး မတ်တပ်ထလိုက်ကြတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ငါတို့အဖွဲ့ထဲက ဦးဇင်းရဲ့ သင်းပိုင်ကြားထဲက ဖဲတစ်ချပ် ထွက်ကြလာတယ်။ သူက ဘုန်းကြီး လာတဲ့အခါ ဖြုန်းကနဲ သူ့သင်းပိုင်ကြားထဲ ထိုးထည့်ထားလိုက်တာကိုး။ အဲဒီ ဖဲချပ်ကို ဘုန်းကြီးလဲ မြင်ရော... မုနိန္ဒ အဲဒါ ဘာလဲတဲ့။ သိသိကြီးနဲ့ မေးတာ။ အဲဒီ ဦးဇင်းလဲ ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ၀မ်း ပါဘုရား တဲ့။ A အကြီးကြီး တစ်ပေါက်ထဲ ဖဲချပ်လေ။ ဘုန်းကြီး စိတ်တွေ ဆိုးပြီး... မုနိန္ဒ.. မင်းလဲ မကြီးမငယ်နဲ့... မိုက်ချင်သေးတယ် ဆိုပြီး အားလုံးကို နဘန်ကျင်းသွားတယ်။ ပြီးတော့ မေးသေးတယ်။ ဒီ ဖဲထုပ် ဘယ်က ရလာတာလဲ တဲ့။ အဲဒီ ဦးဇင်းက ဖြေလိုက်တယ်။ ကိုရင်ကိုကိုမောင် ယူလာတာတဲ့။ ကဲ မှတ်ကရော။ အ တဲ့ သူ ခံကြစတမ်းပေါ့။ ဒါဖြင့် မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါ့အပိုင် မဟုတ်ဘူး။ အခြားဘုန်းကြီးကျောင်းသား တစ်ယောက်ဆီက ခဏသွားငှားထားတာလေ။ သူတို့လဲ သိရဲ့သားကြီးနဲ့"
"အဲဒါပြီးတော့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်သေးလဲ သူကြီးမင်း"
"ဘုန်းကြီးက ပြောတယ်။ ကိုရင်ကိုကိုမောင်... မင်း ငါ့နောက်လိုက်ခဲ့။ ရော့ ဒီဖဲထုပ်ပါ ယူလာခဲ့တဲ့။ ငါလဲ ဘုန်းကြီးနောက် လိုက်သွားလိုက်တယ်။ ဘုန်းကြီးက မီးခြစ်နဲ့ ဖယောင်းတိုင် ယူလာပြီး ဖဲ တစ်ချပ်ချင်းစီကို မီးရှို့ခိုင်းတယ်။ အားလုံး အချပ်ငါးဆယ်ကျော်ဘဲ။ မီးရှို့ပြီးတော့ ရေတစ်ခွက် သွားခပ်ခိုင်းတယ်။ ငါလဲ စိတ်ထဲက ဘုန်းကြီး ရေဆာလို့ နေမှာပါဆိုပြီး ရေတစ်ခွက် သွားယူလိုက်တယ်။ ဘုန်းကြီးက အဲဒီ ရေခွက်ထဲ ခုနက မီးရှို့ထားတဲ့ ဖဲချပ်ပြာမှုန့်တွေကို ထည့်ခိုင်းတယ်။ နောက် မွှေခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ ငါ့ကို သောက်ခိုင်းပါရောလား မောင်ပေါက်ကျော်.."
"ဟား ဟား ဟား။ ဘယ်လို အရသာရှိလဲ သူကြီးမင်း"
"ထွီး... တစ်ငုံသောက်ကြည့်ပြီး မထိန်းနိုင်ဘူး။ ထွေးထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဘယ်လို အရသာမှန်းတောင် ကောင်းကောင်း မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ စပ်ခါးခါးနဲ့ ပြာအနံ့ ထင်တာပါဘဲ။ ငါလဲ ဆက်မသောက်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီနေရာမှာတင် ငါ့ကို ဘုန်းကြီးက ဆော်ပလော် ထပ်တီးတော့တာပေါ့ကွာ။ ပြီးတော့ ထပ်ပြောသေးတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဖဲကစားတာ မိရင် ဖဲပြာဟင်းနဲ့ ထမင်းစားရဖို့ ပြင်ထားတဲ့"
"သူကြီးမင်းကတော့ ရေပေါင်းစုံ ဟင်းပေါင်းစုံ စားဖူးမဲ့ ပုံဘဲနော်"
"ငါလဲ နောက်တော့ ဖဲမကစားရဲတော့ပါဘူးကွာ။ ဖဲဖျော်ရည် သောက်ရတာနဲ့တင် နောင်ကြဉ်သွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခြား ကိုရင် ကျောင်းသားတွေကတော့ ထပ်ကစားကြသေးတယ်ကွ"
"ဟုတ်လား သူကြီးမင်း။ တော်တော် သတ္တိရဲတဲ့ ကိုရင် ကျောင်းသားတွေဘဲ"
"သတ္တိရဲဆို သူတို့က ကျောင်းပေါ်မှာ မကစားကြဘူးလေ"
"ဒါဖြင့် ဘယ်မှာ သွားကစားကြတာလဲ"
"မင်းပြောတဲ့ အိမ်သာနက်ထဲ သွားကစားကြတာ"
"ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အိမ်သာနက်ထဲ သွားကစားကြတာလဲ သူကြီးမင်း"
"အေးကွာ.. ပြောရရင်တော့ အဲဒီတုန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကိုရင်ကျောင်းသားက စုစုပေါင်း ရာချီရှိနေတာကိုး။ အဲဒီတော့ ကိုရင်အိမ်သာသီးသန့်၊ ကျောင်းသာအိမ်သာ သီးသန့် ဆောက်ထားပေးရတယ်။ ကျောင်းသား ဦးရေက ပိုများတဲ့အတွက် ကျောင်းသားအိမ်သာကို ပိုကြီးကြီး ဆောက်ပေးရတယ်။ အလျား ၁၅ ပေ အနံ ၅ ပေ လောက်ရှိတယ်။ အနက်က ၁၅ ပေလောက် ရှိမယ်ထင်တယ်။ အိမ်သာကျင်းပေါ် ကြမ်းပြင်ခင်းထားတယ်။ အိမ်သာတက်ဖို့ အပေါက် ၇ ပေါက်လောက် ဖောက်ထားပေးတယ်။ တစ်ပြိုင်နက် ၇ ယောက် တက်လို့ရတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခန်းတော့ ဖွဲ့ထားမပေးဘူး။ အမိုးကို သက်ကယ် မိုးပေးထားတယ်။ အဝေးက ကြည့်ရင်တော့ အိမ်သာနဲ့ မတူဘဲ အိမ်တစ်လုံးနဲ့ တူနေတယ်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို။ အဲဒီ အိမ်သာကို သုံးစွဲခဲ့တာ ကြာပြီထင်ပါ့။ တစ်ဝက်လောက်က ပြည့်နေပြီ။ အိမ်သာကလဲ သိပ်မကောင်းတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲ နောက်ထပ်အိမ်သာတစ်လုံးထပ်ဆောက်တယ်။ ရေလောင်းအိမ်သာပေါ့။
ရေလောင်းအိမ်သာ ဆောက်ပြီးသွားတော့ ကျောင်းသားအများစုက ရေလောင်း အိမ်သာဘက် သွားတက်ကြတယ်။ လက်ရှိ အိမ်သာကို သိပ်အသုံး မပြုကြတော့ဘူး။ အိမ်သာပျက်လိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရေလောင်းအိမ်သာ မသုံးတတ်တဲ့ တစ်ချို့ ကျောင်းသားအနည်းစုက ရံဖန်ရံခါ အိမ်သာပျက်မှာ လာတက်တတ်တယ်။ ကိုရင်ကျောင်းသားတွေက အဲဒီအိမ်သာပျက် ကြမ်းပြင်ကို ခွါလိုက်ပြီး အိမ်သာထဲ ဆင်းကာ ကျင်းတစ်ဝက်လောက်မှာ လင့်စင်လိုလို စင်တစ်ခု သွားထိုးထားကြတယ်။ ထောက်တိုင်တွေနဲ့ ကျကျနန ကန်ထားတယ်။ လေးငါးယောက်လောက်တော့ အသာလေး နေလို့ရတဲ့ လင့်စင်မျိုးပေါ့။ ပြီးတော့ ကြမ်းပြင်ကို ပြန် ခင်းထားလိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သံတော့ ထပ်မရိုက်ထားတော့ဘူး။ စာအံကျောင်းဆင်းရင် ဖဲကစားမဲ့ ကိုရင်ကျောင်းသား ငါးယောက်လောက် အိမ်သာကို လာပြီး ကြမ်းပြင်ကို ခွါ၊ အိမ်သာထဲဆင်း၊ ကြမ်းပြင်ကို ပြန်ကပ်၊ လင့်စင်ပေါ် ကျကျနန ထိုင်၊ ဖယောင်းတိုင် မီးထွန်းပြီး ဖဲကစားကြတော့တာပေါ့၊ လင့်စင်ပြိုကျရင်တော့ ဗြန်းကနဲ နေမှာ။ ဒါပေမဲ့ လင့်စင်က အခိုင်သား တစ်ခါမှ ပြိုမကျခဲ့ဘူး"
"တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကိုရင်ကျောင်းသားတွေ။ ဒါနဲ့ သူတို့ အနံ့ မနံကြဘူးလား"
"မနံဘဲ ဘယ်နေပါ့မလဲကွာ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုကို ကြိုက်မှတော့ ကျန်တာတွေ မေ့ထားကြတော့တာပေါ့။ မင်းသိတဲ့ အတိုင်းဘဲလေ ကြိုက်မိသွားရင် ဘာကိုမှ မရွံရှာတတ်ကြတော့ဘူး မဟုတ်လား"
"ဒါဆိုရင်ရော သူတို့ကော ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့ မိသေးလား"
"သူတို့ကတော့ အေးဆေးပါဘဲ။ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး မသိလိုက်ရှာဘူး။ မသိဆို သူတို့ကလဲ လူယုံလောက်ဘဲ အသိပေးထားတာလေ။ အားလုံးမသိကြဘူး။ အားလုံးသိရင် သူလျှိုတွေ ရှိတယ်မဟုတ်လား။ စိတ်မချရဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ တစ်ဖွဲ့ဘဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပေါ့"
"ဒါဖြင့် သူကြီးမင်းက သူတို့ အိမ်သာနက်ထဲ ဖဲကစားတာ ဘယ်လိုလုပ် သိတာလဲ။ ဧကန္တတော့ သူကြီးမင်း ကိုယ်တိုင် အိမ်သာထဲ ဆင်းပြီး ကစားခဲ့ဖူးတယ် ထင်ပါ့"
"မဟုတ်ရပါဘူး မောင်ပေါက်ကျော်ရာ။ ငါသိရခြင်းအကြောင်းက ဒီလို။ ကျောင်းဝင်းက အကျယ်ကြီးဆိုတော့ အိမ်သာကို ကျောင်းအဆောင်ကနေ တစ်ပြလောက် ခပ်ဝေးဝေးမှာ ဆောက်ထားတယ်။ အိမ်သာနဲ့ ကပ်ရက်မှာ ၀ါးနက်ရုံကြီး တစ်ရုံရှိတယ်။ လေတိုက်ရင် တရှဲရှဲနဲ့ပေါ့။ ညဘက်မဆိုထားနဲ့ နေ့လည်ဘက်မှာတောင် တစ်ယောက်ထဲ အိမ်သာ မတက်ရဲတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေ အများကြီး။ တစ်နေ့ သူတို့အုပ်စု အိမ်သာနက်ထဲ ဖဲကစားနေစဉ်မှာ ရေလောင်းအိမ်သာ မသုံးတတ်တဲ့ ကျောင်းသား တစ်ယောက် အဲဒီအိမ်သာပျက်မှာ အိမ်သာ လာတက်တယ်။ အဲဒီကျောင်းသားက အိမ်သာအောက်ထဲမှာ ဖဲကစားနေကြတာကို မသိဘူး။ အိမ်သာ တံခါးကို အသာလေး ဖွင့်ပြီး အိမ်သာထဲဝင်ကာ အိမ်သာပေါက် တစ်ခုအပေါ် ထိုင်လိုက်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ သူထိုင်တဲ့ အိမ်သာပေါက် အောက်တည့်တည့် နံရံကပ်ရက်မှာက ဖဲကစားနေတဲ့ ကိုရင်ကျောင်းသားတွေ ရှိနေကြတယ်။ ထွက်ခါနီးလေး အချိန်မှာဘဲ အောက်က ဖဲဝိုင်းထဲက ကျောင်းသား တစ်ယောက်က အပေါ်ကို လှမ်းပြောလိုက်တယ်။ ဟေ့ကောင်.. ဒီအပေါက်တည့်တည့်အောက်မှာ ငါတို့ ရှိနေတယ်။ မင်း ဟိုဘက် အစွန်က အပေါက်ကို သွားပြီး အိမ်သာတက်ပါ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အပေါ်က ကျောင်းသားလဲ အိမ်သာထဲက သရဲခြောက်တယ် ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓံ ပူဇေမိ၊ ဓမ္မံ ပူဇေမိ၊ သံဃံ ပူဇေမိ လို့ အကျယ်ကြီး အော်ဟစ်ကာ အိမ်သာ မတက်ဘဲ ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးက အဲဒီလို ဘုရားစာတွေ ရွတ်ဖတ်ရင် တစ္ဆေသရဲတွေ ထွက်ပြေးသွားတယ် လို့ သင်ထားတာကိုး။ ဒါနဲ့ နေ့လည်ခင်းကြောင်တောင် သရဲ မခြောက်လောက်ပါဘူး ဆိုပြီး ငါတို့ သွားကြည့်ကြတယ်။ အဲဒီတော့မှ အိမ်သာနက်ထဲက ဖဲဝိုင်းအကြောင်း ငါ သိသွားတာ။ ဒါကြောင့် မင့်ကို ငါ အခု ပြန်ပြောပြနိုင်တာ"
"ဟား ဟား ဟား သူကြီးမင်းက စုံနေတာဘဲ။ ဒါဖြင့် အဲဒီနေ့ဟာ သူကြီးမင်းအတွက် အိမ်သာနက်ထဲက ပေါ်ကာဒေး တစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်"
"ကဲ ကဲ မောင်ပေါက်ကျော်။ သူများ စားနေတုန်း သောက်နေတုန်း ငါတုိ့ ပြောတာတွေ ကြားသွားရင် မကောင်းဘူး။ အားနာစရာကြီး။ ဒီစကား ဒီမှာ ရပ်ပြီး ဘလော့ဂါဒေးဘက် လှည့်ကြဦးစို့ရဲ့"
"သူကြီးမင်း အခုတောင် အတော်လေး ရှည်သွားပြီနော်။ နာမည်တွေ အကုန်လိုက်ရေးနေရင် မိုးလင်းသွားလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သူကြီးမင်းက နာမည်တွေ အများကြီး တန်းစီရေးပေမဲ့ သူကြီးမင်းရဲ့ ရွာသားတွေက သူတို့ နာမည်ကိုဘဲ ရွေးပြီး ရှာဖတ်တတ်ကြတာကလား"
"ဟာ... မင်း အဲဒီလိုတော့ မပြောပါနဲ့ကွာ။ သူတို့ ဖာသာ သူတို့ နာမည်ကို အရင်ရှာဖတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ သူတို့နာမည်တွေ့ပြီးရင် ကျန်တာတွေကိုလဲ ဖတ်ပါတယ်"
"ဒါနဲ့... သူကြီးမင်း... ကျနော် ဟို ရွာသုံးရွာကို ရောက်ခဲ့တယ်။ ဘလော့ဒေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ရွာတွေက အင်တာတိန်းမင့် မဆိုးဘူး။ ကျနော်ကြိုက်တယ်"
"ရှူး တိုးတိုး... မင်း အဲဒီလို မခွဲခြားနဲ့။ ရွာတိုင်းက ဆက်ဆံရေး ကောင်းကြပါတယ်။ ပြီးတော့ မင်းက ဘယ်ချောင်ချို ချောင်ခြားက ရွာကို ရောက်ခဲ့တာလဲ မသိဘူး။ ဒါနဲ့ ဆိုစမ်းပါဦး၊ မင်းက ဘယ်သုံးရွာကို ရောက်ခဲ့တာလဲ"
"ပြောပြောချိုတဲ့ ချောချောတို့ရွာ၊ အသာမာန်ဖီနေတဲ့ ဆရာဟန်ကြည်တို့ရွာ၊ မဟာအချစ်တွေနဲ့ ဆရာမြစ်တို့ရွာ တွေလေ"
"အာ... မင်းက တကယ့် ရွာကြီးတွေ ရောက်ခဲ့တာကိုး။ သူတို့က တကယ့် ပရိုတွေကွ။ ဒါကြောင့် မင့်ကို သေချာ ဧည့်ခံပေးကြတာ"
"ပရိုဆိုတာ ဟို.... လက်ရှိပဒေသရာဇ်ရဲ့ ဘက်တော်သားတွေကို ပြောတာလား သူကြီးမင်း"
"ဘယ်ကလာ... မဟုတ်တာ။ ငါပြောတာက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကို ပြောတာ"
"သူတို့ရဲ့ ဘလော့ဒေးကို ဖတ်ကြည့်ရင် မင်း မြင်လာလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ စေတနာ၊ သူတို့ရဲ့ ၀ါသနာ၊ သူတို့ရဲ့ အနစ်နာ တွေကို။ ဘလော့တိုင်းကို သေသေချာချာ ကျကျနနဖတ်ပြီး ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပုံဖော်ပေးထားကြတယ်။ ပြီးတော့ အဆင်သင့်ဖတ်နိုင်အောင် မအားတဲ့ ကြားထဲက အချိန်တွေ အင်အားတွေ အများကြီး စိုက်ထည့်ထားပြီး လင့်ခ်တွေကို ချိတ်ပေးထားကြတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး စေတနာ ၀ါသနာ အနစ်နာတွေကို မင်းလဲ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါလဲ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ပြောတာ သူတို့က တကယ့် ပရိုတွေလို့"
"အင်း ဟုတ်တယ်နော်။ ချီးကျူးစရာဘဲ"
"ကဲ ကဲ ချီးကျူးရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူး။ ဘလော့ရွာသားတွေ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာပြီး ကျက်သရေတိုးပွါးအောင် ၀ိုင်းဝန်းပြီး ဆုတောင်း ပေးကြဦးစို့ရဲ့"
"ဖော.... ဿရီး... တူး... ၀မ်း ...."
"(ဘ၀တု သဗ္ဗမင်္ဂလံ) သံပြိုင်"
"အာ.. မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒီစကားလုံးက ၀ံပုလွေရွာသူ မေဓာဝီ အိပ်ခါနီး အိပ်ချင်မူးတူး ဆုတောင်းသွားတဲ့ ခပ်တိုတို ဆုတောင်းလေးဘဲ။ သူ့ခမျာ တော်သေးတယ်။ မင်္ဂလံ မရောက်ခင် အိပ်မပျော်သွားလို့"
"ဒါဖြင့် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ သူကြီးမင်း"
"ငါတို့ ဒီလို လုပ်ကြရအောင်... ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းအေးဖို့ အန်တီတင့်ရဲ့ ကမ္ဘာအေးဘုရား သွားဖူးရအောင်။ ဟုတ်ပြီလား။ အဲဒါပြီးရင် မောင်လေးရဲ့ တည်းခိုခန်း အဲလေ... မျောလွင့်တိမ်တို့ နားခိုရာမှာ ခဏအပန်းဖြေမယ်။ သူကလဲ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဧည့်ခံလေ့ရှိတတ်တယ်လေ။ အဲဒီနောက်တော့ သီချင်းလေး တကြော်ကြော်နဲ့ အညာပုဂံ ဘုရားဖူး သွားကြတာပေါ့"
"ဟာ... ဟုတ်တယ်။ အဲဒီ အစီအစဉ်ကောင်းတယ် သူကြီးမင်း။ သွားကြစို့ရဲ့"
နာမည်အားလုံး မဖော်ပြနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဘလော့ဂါဒေးမှာ ဘလော့ဂင်းသူတွေကော ဘလော့ဖတ်သူတွေကော ၃၁ဘုံသားတွေကော ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ မှန်သမျှ ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေ။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 03:59 34 comments:
ပုံပြင်လိုလို ဒဏ္ဍာရီလိုလို ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် ကြားဖူးတယ်။ တစ်ခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ ကောင်လေး တစ်ယောက် ရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီကောင်လေးဟာ ညတိုင်း မြွေတွေကို အိပ်မက်မက်တယ်တဲ့။ မြွေတွေမှ အများကြီးဆိုဘဲ။ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် တန်းစီပြီး တစ်ကောင်ချင်းစီ သူ့ရှေ့က ဖြတ်သွားတယ်တဲ့။ သူလဲ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူးတဲ့။ အဲဒီ အိပ်မက်ကို ညစဉ်မက်နေတယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ကို သွားမေးလိုက်တယ်တဲ့။ ဆရာတော်ကလဲ ဒီကောင် ထူးဆန်းတယ် သိုက်နန်းက လာတာဖြစ်ရမယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ဆရာတော်က မင်း နောက်တစ်ခါ အဲဒီလို မြွေတွေ တန်းစီပြီးလာတာကို ထပ်အိပ်မက်မက်ရင် ဒီကြိမ်လုံးလေးနဲ့ ရှေ့ဆုံးက မြွေကြီးရဲ့ ခေါင်းတည့်တည့်ကို အသာလေးထိလိုက်ပါ၊ ရော့ ဒီကြိမ်လုံးလဲ ယူသွားလို့ ပြောသတဲ့။ ဒါနဲ့ အဲဒီကောင်လေးလဲ ဆရာတော်ပေးတဲ့ ကြိမ်လုံးလေး အိမ်ကို ယူပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်တဲ့။ ညဘက်ရောက်တော့ စိတ်ထဲမှာ ဒီတစ်ခါ အိပ်မက်မက်ရင် ဒီကြိမ်လုံးနဲ့ မြွေခေါင်းကို ထိကို ထိမယ်လို့ စဉ်းစားပြီး အိပ်ပျော်သွားသတဲ့။
အိပ်မက်ထပ်မက်ပြန်သတဲ့။ အရင်က အိပ်မက်အတိုင်းဘဲတဲ့။ ဒါနဲ့ သူလဲ အိပ်မက်ထဲမှာ ဆရာတော်ပေးခဲ့တဲ့ ကြိမ်လုံးနဲ့ ရှေ့ဆုံးက မြွေခေါင်းကို ထိမယ်လို့ ကြံလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မြွေက ကြီးလွန်းတော့ ကြောက်စိတ်ဝင်ပြီး မထိလိုက်ရဘူးတဲ့။ မြွေတွေ အတော်များများကိုလဲ ကြောက်လို့ မထိလိုက်ရဘူးတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံး ခပ်သေးသေး မြွေလေးကိုဘဲ ထိလိုက်ရတယ်တဲ့။ အဲဒီမြွေလေးရဲ့ ခေါင်းကို ထိထိချင်း အဲဒီ မြွေလေးက မြွေဘ၀ကနေ ရွှေချောင်းဘ၀ကို ရောက်သွားသတဲ့။ မြွေသေးသေးလေးဆိုတော့ ရွှေချောင်းလဲသေးသေးလေး ရတာပေါ့။ မြွေအကြီးကြီးကိုထိခဲ့ရင် ရွှေချောင်း အကြီးကြီးရမှာလေ။ အိပ်မက်ထဲမှာ အဲဒီကောင်လေးလဲ ဒီလိုမှန်းသိရင် ငါ မြွေအကြီးကြီးကို ထိခဲ့ပါတယ်လို့ တွေးနေသတဲ့။
နောက်တစ်နေ့ အိပ်ရာနိုးပြီး ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကို သွားလျောက်တော့ ဆရာတော်က ထီထိုးခိုင်းသတဲ့။ အဲဒီကောင်လေးလဲ ထီထိုးလိုက်တာ ထီပေါက်တယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဆုအကြီးကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဆုမကြီးပေမဲ့လဲ သုံးလောက် စွဲလောက်တော့ ရှိသတဲ့။ ဒါနဲ့ အဲဒီကောင်လေးလဲ ဆရာတော်အကြံပေးတဲ့အတိုင်း အလှူအတန်းလေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသတဲ့။
နတ်သမီးရဲ့ အိပ်မက်ထဲက မြွေနဂါးများ ဆိုတဲ့ ပို့စ်အောက်မှာ သူကြီးမင်း ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကွန်မင့် အလယ်သားလေးပါ။ မြွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကောက်ယူလေ့ရှိကြတဲ့ အယူအဆတွေက ဒေသအလိုက် အများအပြား ရှိနေတတ်တယ်။ ဥပမာ လမ်းလျှောက်သွားရင်း မြွေတစ်ကောင် လမ်းဖြတ်ကူးနေတာကို တွေ့မြင်ရရင် ခရီးလမ်းရှည်မယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်တတ်ကြသလို၊ လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ မြွေက လူ လာနေတာကို မြင်လို့ ကြောက်လန့်ပြီး နောက် ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ ရှေ့ ဆက်မသွားနဲ့တော့ အန္တရာယ် ရှိနေတယ်လို့ နိမိတ်ကောက်ကြပြန်ရော။
များသောအားဖြင့်တော့ ကောင်းတဲ့ နိမိတ်ကို ကောက်ကြတာ များပါတယ်။ ဥပမာ အိမ်ပေါ် မြွေတက်တာတို့၊ အိပ်မက်ထဲ မြွေကို မြင်မက်တာတို့ ဆိုရင် လာဘ်ကောင်းတယ်လို့ ယူတတ်ကြတယ်လေ။ ဆိုရိုးလေးတောင် ရှိသေးတယ်။ မြွေမြင်ရင် ငွေရွှင်တယ် တဲ့။ မြွေမြင်ရင် ငွေဝင်မယ် တဲ့။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကောင်းတဲ့ နိမိတ်ကို ယူလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
သူကြီးမင်းမှာ အသိဦးဇင်းတစ်ပါး ရှိတယ်။ သူက တောက တက်လာတဲ့ တောသားစစ်စစ် ဦးဇင်းလေးပါ။ ဘယ်လောက် တောကျသလဲဆိုရင် မြို့က ရေလောင်းအိမ်သာကိုတောင် ကောင်းကောင်း မသုံးတတ်သေးတဲ့ တောသားလေးပါ။ တောရွာမှာက ဒုတ်စက္ကူတွေ သုံးလာခဲ့တာကိုး။ မြို့ရောက်ပြီး ရေလောင်း အိမ်သာ သုံးတတ်အောင် အတော်လေး ကြိုးစားလိုက်ရရှာတယ်။ အိမ်သာထဲမှာ ရှိတဲ့ ရေကန်ထဲက ရေတွေကို ခွက်ကလေးနဲ့ ခပ်ခပ်ပြီး ဆေးကြောသုတ်သင်လာလိုက်တာ သူ တစ်ပါးထဲနဲ့ ရေတွေကုန်သွားတဲ့ အထိဘဲ။ ဒါတောင်မှ အိမ်သာက ပြန်လာရင် လက်ကလေးကို နမ်းကာနမ်းကာနဲ့ သိပ် မသတီ ဖြစ်နေပုံရသေးတယ်။
မြို့ရောက်ပြီး နှစ်အတော်လေး ကြာတော့ နောက် ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ပြောင်းရွှေ့ရတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီ ကျောင်းမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ အိမ်သာက ဗိုလ်ထိုင်တွေ ဖြစ်နေရော။ တောသားဦးဇင်းလေး ရေလောင်း အိမ်သာ သုံးတတ်တာမှ သိပ်မကြာသေးဘူး။ ဗိုလ်ထိုင်အိမ်သာနဲ့ ပက်ပင်း လာတိုးပါရောလား။ ဘ၀ရေစီးကြောင်းနဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်ရင်တော့ တိုးတက်မှု လက္ခဏာပြပေမဲ့ အဲဒီ ဦးဇင်းနဲ့ ဗိုလ်ထိုင် အိမ်သာနဲ့ သိပ် မပြေလည်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။
အိမ်သာတက်ရင် ထိုင်ခုံပေါ် ထိုင်ရမဲ့အစား ခြေထောက်နဲ့ တက်ပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ကိစ္စပြီးလေရဲ့။ အိမ်သာ ထိုင်ခုံပေါ်မှာတော့ ခြေတော်ရာကြီး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ့။ စပရေးကိုလဲ မသုံးတတ်သုံးတတ်နဲ့ သုံးကြည့်တယ် ထင်ပါ့။ စပရေးထိပ်ဖျားမှာ မစင်အစလေးတွေတောင် ခိုနားနေလေရဲ့။ ဖြစ်ပျက်ပုံ ပြောပါတယ်။ သူ့ခမျာ နေ့စဉ် အိမ်သာတက်ရတဲ့ ဒုက္ခကို တောင်သူယာလုပ် ဓါးမခုတ် ဘ၀ထက် ပို ပင်ပန်းတယ်လို့တောင် ထင်နေချေသေးရဲ့။
အိမ်သာထိုင်ခုံပေါ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ကိစ္စရှင်းတာက အရေးမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကြာလာရင်တော့ ပြဿနာ တက်လာနိုင်တယ်။ မတော်လို့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ ၀ိတ်အားကြောင့် အိမ်သာထိုင်ခုံလဲကွဲ အိမ်သာကြွေခွက်လဲ ကွဲထွက်ပြီး မတော်ရာကို ပြတ်ရှမိသွားရင် မဟာ့မဟာ ဒုက္ခကြီးပေဘဲပေါ့။ တော်ကြာ အရင်ဘ၀က တိရစ္ဆာန်တွေကို အရှင်လတ်လတ် ဝှေးသင်းခဲ့ဖူးရင် ပြန်ဝဋ်လည်လာနိုင်တယ် မဟုတ်လား။ ကြားဖူးတာ တစ်ခု ရှိတယ်။ အမေရိကားမှာ ထင်တယ်။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ လင်မယားနှစ်ယောက် နေထိုင်ကြသတဲ့။ တစ်နေ့မှာ လင်လုပ်တဲ့ သူက အိမ်သာတက်သတဲ့။ အနောက်တိုင်း ထုံးစံအတိုင်း ဗိုလ်ထိုင်အိမ်သာပေါ့။ အိမ်သာ တက်နေစဉ်မှာဘဲ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အလေးချိန်ကို မခံနိုင်လို့ အိမ်သာကြွေခွက် ကွဲသွားတယ်တဲ့။ လူလဲ ဖင်ထိုင်ရက်ကြီး ကျသွားသတဲ့။ ဖြစ်ချင်တော့ ငယ်ပါ (ဥနှစ်လုံး)ကို ဓါးနဲ့ လှီးဖြတ်လိုက်သလို ပြတ်ရှသွားတယ်တဲ့။ ဆေးရုံပို့ပြီး ကုသလိုက်ရတယ်တဲ့။
သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအခွင့်အရေးအရ အိမ်သာ ကြွေခွက် လာတပ်ဆင်တဲ့ သူကို တရားစွဲလို့ ရတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ အဲဒီ အိမ်သာကြွေခွက် တပ်ဆင်တဲ့သူကို တရားစွဲလိုက်တယ်တဲ့။ တရားစွဲတဲ့သူက လင်ယောက်ျား မဟုတ်ဘဲ မယား ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ ဘယ့်နှယ် ပြတ်ရှခံရတာက လင်ယောက်ျား။ တရားသွားစွဲတာက ဇနီးမယား။ စဉ်းတော့ စဉ်းစားစရာကြီးရယ်။း)))
အဲဒီ တောကတက်လာတဲ့ ဦးဇင်းလေးလဲ ဗိုလ်ထိုင် အိမ်သာနဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင် သုံးလေးလလောက် ကြိုးစား လိုက်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတော့လဲ ဗိုလ်ထိုင်မှ ဗိုလ်ထိုင် ဖြစ်သွားရော။ ထိုင်ရတာ သက်သာတာကိုး။ ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်တက်ရတာက ညောင်းညာထုံကျင် ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ နောက်ပြီး ခြင်တွေ ၀င်ကိုက်ရင် ပိုဆိုးသေး။
တစ်ရက်မှာ မိုးလေးကလဲ နဲနဲ စွေနေတယ်။ အဆောက်အဦ ပတ်ဝန်းကျင် ရေနှုတ်မြောင်းနဘေးက ဖားအော်သံ လေးတွေလဲ ညံနေတယ်။ အဆောက်အဦ အနားမှာရှိတဲ့ သရက်ပင်ကလဲ သရက်သီး မှည့်လေးတွေ တဖုတ်ဖုတ် ကြွေကျနေတယ်။ ရာသီဥတုက မပွင့်မလင်းလေးပေါ့။ အဲဒီ ဦးဇင်း နေထိုင်တာက အောက်ထပ်မှာပါ။ အိမ်သာကို ရေချိုးခန်းနဲ့ တွဲထားတယ်။ ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ကို ကြွေပြားလေးတွေ ခင်းထားတယ်။ အဲဒီ ဦးဇင်းလဲ ညကထဲက ၀မ်းနှုတ်ဆေး စားထားတဲ့အတွက် မနက် ဝေလီဝေလင်း အချိန်မှာ အိမ်သာတက်ရတယ်။ ဗိုလ်ထိုင်ဆိုတော့ ကျကျနန ထိုင်ပြီး အစာဟောင်းတွေ အစာပုပ်တွေကို သွန်ထုတ်ပစ်တော့တာပေါ့။ ကိစ္စ၀ိစ္စပြီးလို့ ရေဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်သွားတယ်။ ဗွန်းကလဲ ရေဆွဲချ လိုက်ချင်းဘဲ ရှူးကနဲ ရေတွေ အပေါ် ပြန် ကန်တက်လာတယ်။ တင်ပါးတွေ ပေါင်တွေ ရေစိုသွားကုန်တာပေါ့။ အဲဒီ ဦးဇင်းလဲ အလန့်တကြား အောက်ကို ငုံ့ ကြည့်လိုက်မိတယ်။ ခေါင်း ငေါက်တောက်ကြီး။ လှုပ်စိ လှုပ်စိနဲ့။း))
တစ်လွဲ မထင်ပါနဲ့။ မြွေကြီး။ မြွေကြီး။ တကယ့်မြွေကြီး။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အိမ်သာကြွေခွက် အခေါင်းထဲ အောင်းနေမှန်းမသိဘူး။ မိလ္လာပိုက်ထဲကဘဲ တစ်ဆင့် ရောက်လာတာလား။ ဒါမှ မဟုတ် ရေချိုးတဲ့အခါ ရေထွက်တဲ့ အပေါက်ကဘဲ ၀င်လာပြီး သွားမိသွားရာ သွားပြီး အိမ်သာ ကြွေခွက်ထဲ ၀င်သွားတာလား။ ဒါမှ မဟုတ် နတ်နဂါးမြွေလားဆိုတာ ဘယ်သူမှတော့ အတိအကျ မသိပါဘူး။ ဒါနဲ့ အဲဒီ ဦးဇင်းလဲ... မြွေကြီး.. မြွေကြီးဆိုပြီး အော်ဟစ်ကာ အကူအညီတောင်းတော့တာပေါ့။ သူ ကိုယ်တိုင်မှာတော့ သင်းပိုင်လေး မကာမကာနဲ့။း))
တစ်ခြား ဦးဇင်းတွေ ရောက်လာကြတယ်။ အုန်းမှုတ်ခွက်ထဲ မြွေကြီးခွေ.... တုတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ထိုးလိုက်ပါလား... ဆိုတဲ့ သံချပ် သီချင်းလေးကို သတိရပြီး မြွေဆိုတာ အန္တရာယ်ရှိတယ်၊ အနီးကပ် မောင်းထုတ်ရင် ရန်ပြုနိုင်တယ် ဆိုပြီး ၀ါးလုံး ရှည်ရှည်နဲ့ဘဲ မြွေကို အသာလေးထိုးပြီး မောင်းထုတ်ကြတယ်။ မြွေလဲ ကြိုးစားပြီး ထွက်ပြေးရှာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြွေမှာလဲ ခြေထောက်မပါ၊ အောက်က ခင်းထားတာကလဲ ကြွေပြားဆိုတော့ မြွေခမျာ ဟိုတွန့်ဒီတွန့်နဲ့ ရှေ့ မရောက်ရှာဘူး ဖြစ်နေလေရဲ့။ ဦးဇင်းတွေက မြွေကိုကြောက်၊ မြွေကလဲ ဦးဇင်းတွေကို ကြောက်နဲ့ အကြောက်ပြိုင်နေကြတဲ့ ပွဲဟာ အတော်လေး ကြာသွားခဲ့တယ်။
ဦးဇင်းတွေကလဲ စဉ်းစားတာပေါ့။ ဒီမြွေဟာ ရိုးရိုးမြွေမှ ဟုတ်ရဲ့လား။ မတော်သကာ အခိုးအငွေ့တွေ ဘာတွေ ညာတွေ ထုတ်လွှတ်ခဲ့ရင် အရှင်လတ်လတ် ဒုကူလနှင့်ပါရိကာလို ဖြစ်ရချည်သေးရဲ့။ ဒါမှ မဟုတ် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားထဲကလို တစ်ရှိန်ထိုး ပျံသန်းလာပြီး လာကိုက်နေမှဖြင့် ဓမ္မာစရိယလေး ဘာလေးတောင် မအောင်သေးဘဲနဲ့ တမလွန် ရောက်ရချည်သေးရဲ့ ဆိုပြီး ကြောက်လန့်နေကြတာပေါ့။ မြွေခမျာမှာလဲ စဉ်းစားပေရှာမပေါ့။ ဒီလူတွေ ထူးဆန်းတယ်။ ကတုံးတုံးပြီး ပခုံးလက်တစ်ဖက် ဖော်ထားတယ်။ ၀တ်စားပုံလဲ တစ်ခြား လူတွေနဲ့ မတူဘူး။ ကြည့်ရတဲ့ပုံကလဲ လက်ရဲဇက်ရဲ လုပ်မဲ့ပုံ။ မတော်လို့ ငါ့ကို ၀ါးလုံးအချွန်နဲ့ တစ်ဇွတ်ဇွတ် လှမ်းထိုးရင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ခဲလုံးတွေ ကြောက်ခဲတွေနဲ့ ပစ်ရင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လေးခွနဲ့ ဆော်ရင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ငါ့ ခန္ဓာကိုယ်က ရှည်မျောမျာနဲ့ ဆိုတော့ ရှောင်ရင်လဲ လွတ်မယ်မထင်ဘူး။ တစ်နေရာမဟုတ် တစ်နေရာတော့ ထိမှာဘဲ လို့ တွေးတောပြီး ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်နေမှာ သေချာတယ်။ ဦးဇင်းတွေကလဲ ရှေ့မတိုးရဲ မြွေကလဲ ပြေးလို့ မရဆိုတော့ မြွေကော ဦးဇင်းတွေကော အခက်တွေ့နေကြတယ်။ ဦးဇင်းတွေက ၀ိုင်းလိုက်ကြမယ်။ မြွေက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်မယ်။ ဒါဆို ပြီးပြီပေါ့။ အခုတော့ မြွေကလဲ တွန့်လိမ်တွန့်လိမ်နဲ့ ပြေးလို့မရ၊ ဦးဇင်းတွေကလဲ ရှေ့မတိုးရဲ ဖြစ်နေကြတယ်။ ဟို ပုံပြင်လိုပေါ့။
တစ်ခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ အိမ်တစ်အိမ်ကို ညဘက် သူခိုးဝင်ကပ်သတဲ့။ အိမ်ရှင်လဲ သူခိုး ၀င်လာတာ သိလို့ နံရံမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ငှက်ကြီးတောင်ဓါးကို ဓါးအိမ်ထဲက ရွှမ်းကနဲ မြည်အောင် ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး သူခိုးနောက် တန်းလိုက်သတဲ့။ သူခိုးလဲ ပြေးနိုင်မှ လွတ်မယ်ဆိုပြီး အိမ်ရှင့်ရန်က လွတ်ကင်းအောင် ထွက်ပြေးသတဲ့။ အိမ်ရှင်ကလဲ ငှက်ကြီးတောင် ဓါးကြီးကိုသာ ကိုင်ပြီး သူခိုးနောက်ကို လိုက်တာလိုက်နေရတယ်။ သူခိုးက ထွက်မပြေးဘဲ ပြန်ခံလုပ်မှာကို တွေးပြီး ကြောက်နေသတဲ့။ သူခိုးကလဲ အိမ်ရှင်လိုက်မီလာရင်တော့ ငှက်ကြီးတောင်စာ မိတော့မှာဘဲလို့ တွေးပြီး အကြောက်ကြီး ကြောက်နေသတဲ့။
ဖြစ်ချင်တော့ သူခိုးက သူဝင်လာခဲ့တဲ့ ၀င်ပေါက်ကို မမှတ်မိတော့ဘူး။ ပြေးမိပြေးရာ ပြေးလိုက်ရတယ်။ အဲဒီ အိမ်ကြီးကို ခြံခပ်မြင့်မြင့် ကာထားတယ်။ ဒါကြောင့် သူခိုးက ဘယ်လိုမှ ပြေးမလွတ်တော့ဘူး။ ခြံစည်းရိုးကို ခုန်ကျော်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့လဲ မအောင်မြင်ဘူး။ သူခိုးလဲ စဉ်းစားမရ တွေဝေနေတယ်။ အိမ်ရှင်လဲ လိုက်လာရင်းနဲ့ သူခိုးနဲ့ နီးကပ်လာတယ်။ သူခိုးခမျာမှာလဲ ငါ့ကို လိုက်မီလာရင် ငှက်ကြီးတောင် ဓါးနဲ့ ခုတ်တော့မှာဘဲ ဆိုပြီး ကြောက်ဒူးတုန်နေသတဲ့။ အိမ်ရှင်ကလဲ ဒီသူခိုး ထွက်မပြေးဘဲနဲ့ ငါ့ကို ခံလုပ်မလား မသိဘူးဆိုပြီး လန့်နေသတဲ့။ ဒါနဲ့ အိမ်ရှင်လဲ ကြံရာမရတဲ့ အဆုံး သူခိုးကို ဟေ့ကောင် သူခိုး... မြန်မြန်ပြေးပါတော့လား။ ဒီခြံစည်းရိုးကြီးကို လွှားကနဲ ခုန်ကျော်လိုက်ပါတော့လား ဆိုပြီး လှမ်းပြောလိုက်ရသတဲ့။
အခုလဲ ဦးဇင်းတွေ အုပ်စုနှင့် မြွေနှင့်က အဲဒီ ပုံပြင်လို ဖြစ်နေလေရဲ့။ အချင်းချင်း ကြောက်နေကြတာ ရယ်ဖို့ကောင်းတယ်။ အတော်လေး ကြာတော့မှဘဲ အဝေးကနေပြီး ၀ါးလုံးနဲ့ မြွေရဲ့ ခေါင်းကို ရေချိုးခန်း ရေထွက်ပေါက်ဆီ တေ့ ပေးလိုက်နိုင်တယ်။ အဲဒီတော့မှဘဲ မြွေက အပြင်ဘက်ကို ဖြေးဖြေးလေး ထွက်သွားတော့တယ်။ ဦးဇင်းတွေကလဲ မြွေကို အန္တရာယ်မပြု မြွေကလဲ ဦးဇင်းတွေကို အန္တရာယ်မပြု နဲ့ မြွေနှင့်ဦးဇင်းတွေကြားက အခက်အခဲဟာ အေးအေးလူလူလေး ပြီးစီးအောင်မြင်သွားတယ်။
အဲဒီ အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီး တစ်လလောက် အကြာမှာ အဲဒီ ဦးဇင်းက ချဲထီထိုးတယ်။ အမှန်ဆို အဲဒီဦးဇင်းက ချဲထီ ၀ါသနာမပါပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ် မသိဘူး။ တစ်ကွက်ထဲကိုဘဲ နှစ်ရာဖိုး သွားထိုးတယ်။ ပတ်တာ လှည့်တာ ဘာမှ မထိုးဘူး။ တစ်ကွက်ဆို တစ်ကွက်ထဲ။ ညနေဘက် ဂဏန်းထွက်လာတော့ ကွက်တိဘဲ။ ဒါနဲ့ဘဲ အဲဒီ ဦးဇင်း ငွေတစ်သိန်း ပိုင်ဆိုင်သွားတယ်။ ဒါတင် မပြီးသေးဘူး။ နောက်တစ်နှစ်လောက် အကြာမှာတော့ အဲဒီ ဦးဇင်းကို နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကြီး တစ်ခုမှာ နေထိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်စုက ပင့်ဖိတ်လာတဲ့ အတွက် အဲဒီ တိုင်းပြည်ကြီးမှာဘဲ သာသနာပြုနေလိုက်တာ အခုထက်ထိ တိုင်အောင်ပါဘဲ။
မြွေမြင်လို့ ငွေဝင်တာလား။ မြွေမြင်လို့ ငွေရွှင်တာလား။ မြွေမြင်လို့ တစ်ပြည်ခင်တာလား။ ဘာလား ညာလား မသိပေမဲ့ သူကြီးမင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ မြွေပုံပြင်လေးကတော့ သူကြီးမင်းတို့ တုံးဖလား ဇနပုဒ်ရွာလေးမှာ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင် ဖြစ်နေလေတော့ရဲ့။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 03:00 26 comments:
ဘိလပ်တွင် သူ နှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံး၌ နေထိုင်သည်။ အိမ်ရှင် အဖိုးကြီးမှာ အသက် ၇၀ ကျော်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ အိမ်ရှေ့၌ ဘိလပ်ထုံးစံ အတိုင်း ၀င်းခြံရှိသည်။ ဘိလပ်တွင် နေထိုင်သူများ များသောအားဖြင့် ၀င်းခြံအတွင်း၌ အလှစိုက်ပန်းများနှင့် အပင်ငယ် အချို့တို့ကို စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြသည်။ သို့သော် သူ နေထိုင်သည့် အိမ်ခြံဝင်း အတွင်း၌မူ အိမ်ရှင် အဖိုးကြီးက ဘာပင်မှ မစိုက်ဘဲ ကွန်ကရစ် လောင်းထားသည်။ ကားရပ်နားဖို့ကား လွန်စွာအဆင်ပြေလှသည်။ ထို့ကြောင့် ကားများ ထိုနေရာ၌ ရပ်နားထားကြသည်။ ရှားရှားပါးပါး ထိုခြံဝင်းထဲ၌ ထီးထီးမားမား ပန်းသီးပင် တစ်ပင်ရှိသည်။ ဟင်းချက်စားသည့် ပန်းသီးပင်ဟု ဆိုသည်။ အရမ်းချဉ်သည်။ အိမ်ရှင်အဘိုးကြီး စိုက်ပျိုးထားသည်လား နဂိုမူလ အိမ်ရှင်လက်ထက်ကထဲက စိုက်ပျိုးထားသည်လား ကွဲကွဲပြားပြား သူမသိပေ။ မည်သို့ဆိုစေကာမူ ယခုအချိန်တွင် ထိုပန်းသီးပင်ကို အိမ်ရှင် အဖိုးအို ပိုင်ဆိုင်သည်မှာ သေချာလေသည်။
သူ သိသည်မှာ ထိုပန်းပင်သည် တစ်နှစ်ကို တစ်ကြိမ် အသီးလှိုင်လှိုင် ဖြစ်ထွန်းသည်။ အသီး ဖြစ်ထွန်းသည်နှင့်အမျှ အိမ်ခြံဝင်း ညစ်ပတ်သည်။ နေ့စဉ် ပန်းသီးတွေ ကြွေကျလိုက် ကားများဖြင့် တက်ကြိတ်မိလိုက်ဖြင့် ကွန်ကရစ်ပြင်လေးမှာ ညစ်ပတ်ချဉ်တူး ဖြစ်လာသည်။ ထိုတာဝန်ကို သူ တာဝန်ယူ ရှင်းနေရသည်။ တာဝန်ဆိုသည်ထက် သူလည်း အညောင်းပြေ လမ်းလျှောက်ရင်း ကြွေကျနေသည့် ပန်းသီးများ ကားကြိတ်ခံထားရသည့် ပန်းသီးပျက်များကို တစ်နေရာ၌ စုပုံပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
သူ သတိပြုမိသည်မှာ ထို ပန်းသီးပင်၌ အသီး ထောင်ချီသီးပေမဲ့ အပင်၏ ထိပ်ဖျား၌မူ ပန်းသီး နှစ်ပြွတ်သာ ရှိနေသည်။ တစ်ပြွတ်က နှစ်လုံး၊ ကျန်တစ်ပြွတ်က ငါးလုံး၊ စုစုပေါင်း ၇ လုံးသာ ဖြစ်သည်။ နှစ်လုံးထဲ ရှိသည့် အပြွတ်က ပန်းသီးများမှာ ချောင်ချောင်ချိချိ နေရ၍ ပိုလှသည်။ ပို တောက်ပသည်။ ပို တက်ကြွသည်။ အလုံးပိုထွားသည်။ မှည့်ချိန်ရောက်သည့်အခါ ၀င်းဝင်းပပ မာန်ကြွနေသည်။ ငါးလုံးပြွတ်က ပန်းသီးများမှာမူ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း နေရ၍ထင့်။ အသီး မလှ။ တောက်ပမှု မရှိ။ အေးအေးသက်သာ အဆင်ပြေသလိုနေသည်။ အလုံး ကြုံလှီသယောင် ထင်ရသည်။ သို့သော် ငါးလုံးပြွတ်လည်း ငါးလုံးပြွတ်မာန်တော့ ရှိနေသည်။
လန်ဒန်မိုးကား အစိုးမရပေ။ မကြာမကြာ မိုးရွာသည်။ မိုးရွာလျှင် လေပါ ပါလာတတ်သည်။ လေတိုက်ဖန် များတော့ ပန်းသီးပင်မှ ပန်းသီးများ တဖုတ်ဖုတ် ကြွေကျသည်။ သို့သော် နှစ်လုံးပြွတ်နှင့် ငါးလုံးပြွတ်တို့မှာမူ မိုးဒဏ်လေဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ ခံနေဆဲပင်။ ထူးဆန်းသည်မှာ လေအကူအညီကို ယူ၍ နှစ်လုံးပြွတ်က ငါးလုံးပြွတ်ကို ရန်ရှာနေခြင်းကို မြင်တွေ့နေရသည်။ အလုံးထွားကျိုင်းမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး လေတိုက်လျှင် သူတို့ ကိုယ်လုံးများဖြင့် ငါးလုံးပြွတ်ကို မကြာခဏ သွားသွားရိုက်ခတ်သည်။ နေ့စဉ် အရိုက်ခံ အတိုက်ခံရဖန် များသည့်အခါ ငါးလုံးပြွတ် ချိနှဲ့စ ပြုလာသည်။ အင်အားခြင်းကလည်းမတူ၊ တက်ကြွခက်ထန်ပုံခြင်းကလည်း မညီမျှသည့်အတွက် တိုက်ခိုက်ဒဏ်ကြောင့် ငါးလုံးပြွတ်မှ အနည်းငယ်ပိုကြီးသည့် အလုံး မြေခရလေသည်။ ရက်အနည်းငယ် ကြာသည့်အခါ ငါးလုံးပြွတ်မှ နောက်တစ်လုံး ကြွေကျပြန်သည်။ ငါးလုံးပြွတ်ဘ၀မှ သုံးလုံးပြွတ်ဘ၀ ရောက်သွားရရှာသည်။
သို့သော် နှစ်လုံးပြွတ်ကတော့ ပန်းပန်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ လေအကူအညီကို ရယူပြီး သုံးလုံးပြွတ်အား အင်တိုက် အားတိုက် တိုက်ခိုက်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ အင်အား ချိနှဲ့နေပြီ ဖြစ်သည့် သုံးလုံးပြွတ်မှ နောက်ထပ် တစ်လုံး ထပ်ကြွေကျပြန်သည်။ နှစ်လုံးပြွတ်၏ အောင်ပွဲပင် ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သည့် နှစ်လုံးပြွတ်၏ မြူးကြွပုံကား အမြင်ကပ်ဖွယ်ပင် ကောင်းတော့သည်။ တိုက်ခိုက်မှုကလည်း ပို၍ ပြင်းထန်လာသည်။ လေလာတိုင်း နေ့နေ့ ညည သဲသဲမဲမဲ တိုက်ခိုက်နေလေသည်။ တိုက်ခိုက်ခံရဖန်များ၍ ငါးလုံးပြွတ်မှ နောက်ထပ် တစ်လုံး မြေသို့ သက်ဆင်းရပြန်လေသည်။ ငါးလုံးပြွတ်ဘ၀မှ တစ်လုံးပြွတ်ဘ၀သို့ နေ့ချင်း ညချင်း ရောက်သွားလေသည်။ သို့သော် နှစ်လုံးပြွတ်မှာမူ နှစ်လုံးတိတိ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ရှိနေလျှက်ပင် ဖြစ်သည်။ မိုက်မဲခက်ထန် ရိုင်းစိုင်းသူတို့တို ဘာကြောင့် လေက မျက်နှာလိုက်မှန်း သူ ကောင်းကောင်း နားမလည်တော့ပေ။
ငါးလုံးပြွတ်မှ တစ်လုံးတည်းသော အသီးသည် အနည်းငယ် ထွားကျိုင်းလာသည်။ ချောင်ချောင် ချိချိ ဖြစ်လာ၍ထင့်။ တစ်လုံးတည်း ထီးထီးဖြင့် အေးအေး ဆေးဆေး ရှိနေသည်။ သို့သော် နှစ်လုံးပြွတ်၏ ရန်ကိုမူ ကြည့်ရှောင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။ ငါးလုံးပြွတ် ဘ၀တုန်းကတောင်မှ အထိနာခဲ့သည်လေ။ နှစ်လုံးပြွတ်၏ ဘယ်ညာတိုက်စစ်ကို ဘယ်ယိမ်းညာယိမ်းဖြင့် ရှောင်ဖယ်နေရလေသည်။ နှစ်လုံးပြွတ် အင်အား ပိုကောင်းလာသည်။ အမှည့်ရောင် သန်းလာပြီး ကြည့်၍ ပိုလှလာသည်။ မာနလည်း ပိုကြီးလာသည်။ လက်ကျန်နောက်ဆုံး တစ်လုံးကို ချွေချနိုင်လျှင် ပွဲသိမ်းသွားပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပို၍ တိုက်စစ်ဆင်လာသည်။
သို့သော် လက်ကျန် တစ်လုံးသည် အတွေ့အကြုံနှင့် သင်ခန်းစာကို ကောင်းကောင်း သိပြီး ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် တိုက်ခိုက်မှုကို ရှောင်တိမ်းလာနိုင်သည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်လေမူ ရှောင်တိမ်းမရသောကြောင့် ရှပ်ထိခံရလေသည်။ တိုက်စစ် မလိုလားသည့် လက်ကျန်တစ်လုံးအား တစ်ဘက်သတ် တိုက်ခိုက်နေသလို ဖြစ်နေသည်။ ပွဲကား ကြည့်မကောင်းလှပေ။
တစ်နေ့ လေ ခပ်ကြမ်းကြမ်း အတိုက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး နှစ်လုံးပြွတ်သည် ငါးလုံးပြွတ်မှ လက်ကျန်တစ်လုံးကို အားမာန်အပြည့်ဖြင့် လွှဲရိုက်တိုက်ခိုက်လေသည်။ လက်ကျန်တစ်လုံးက အသာလေး တိမ်းရှောင်လိုက်၍ နှစ်လုံးပြွတ် အရှိန်လွန်သွားလေသည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်လုံးပြွတ်မှ ပိုကြီးသော၊ ပို လှသော၊ ပို တက်ကြွသော၊ ပို မာန်ရှိသော ပန်းသီးကြီး တစ်လုံး အညှာရင်းမှ ပြုတ်ထွက်ပြီး မြေခ ကြွေကျလေရှာတော့သည်။ လေ အကူအညီဖြင့် ငါးလုံးပြွတ်ကို ဖြိုခွင်းခဲ့သည့် နှစ်လုံးပြွတ်မှ အလုံးကြီး တစ်လုံးသည် ထိုလေ၏ ရိုက်ခတ်မှုဖြင့်ပင် မြေသို့ ဆင်းခဲ့ရရှာလေပြီ။ လေတိုက်အားက ခပ်ကောင်းကောင်း၊ လွှဲချော်ရိုက်လိုက်သည့် အရှိန်က ခပ်ပြင်းပြင်း၊ အလုံးက ခပ်ကြီးကြီး၊ နေရာက ခပ်မြင့်မြင့်၊ ခင်းထားသည့် ကွန်ကရစ်က ခပ်မာမာ ဆိုတော့ အောက်အကျ အတော်လေး နာသွားသည်။ အခြေအနေ အတော် ဆိုးသွားသည်။ ပန်းသီးကြီး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ကျော် လုံးဝကြွေမွ ပျက်စီးသွားလေသည်။ ပင်မြင့်မှာ ခပ်စွင့်စွင့်ဖြင့် မာန်ဝင့်ခဲ့သည့် ပန်းသီးကြီး၊ အခုတော့ မြေခကြွေကျပြီး သင်္ခါရနယ်ပယ်ထဲ ရောက်ရရှာလေပြီ။
အသက် ဘယ်သို့ ပြင်း
ယခုဆိုလျှင် နှစ်လုံးပြွတ်၌လည်း တစ်လုံးထဲ၊ ငါးလုံးပြွတ်၌လည်း တစ်လုံးထဲ ကျန်နေလေတော့သည်။ နှစ်လုံးထဲ ရှိတော့သည်မို့ ထိပ်တိုက် တိုက်ခိုက်မှု မရှိပေသည့်တိုင် လေများများတိုက်သည့် အခါ၌မူ မသိမသာ ပွတ်တိုက် ကြဆဲပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြင်းထန်မှုကား မရှိတော့ချေ။ လွန်ခဲ့သည့် ကာလများလောက် လေကလည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းမတိုက်ခတ်တော့ပေ။ သို့သော် တိုက်ပွဲတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း ဒဏ်ရာကိုယ်စီတော့ အနည်းငယ် ရှိကြလေသည်။ ပင်မြင့်၌ အရွယ်အစားချင်း တူညီနေပြီ ဖြစ်သည့် ပန်းသီးနှစ်လုံး လေယူရာ ယိမ်းရင်း အချင်းချင်း မျက်စောင်း ထိုးမြဲထိုးနေကြလေသည်။ သို့သော် ပြိုင်ပွဲအဆင့် မဟုတ်တော့ပေ။ သူသည် ထို ပန်းသီးပင် အောက်၌ လမ်းလျှောက်နေကြမို့ ထို အချင်းအရာ အဖြစ်အပျက်တို့အား ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်တွေ့ရလေသည်။
အိမ်ရှင်အဘိုးကြီးသည် ထိုပန်းသီးပင်မှ ပန်းသီးများကို ဟင်းချက်၍လည်း စားသည်။ သရက်သီးစိမ်းကဲ့သို့ အတို့လုပ်၍လည်း စားလေသည်။ သရက်သီး သုပ်စားသကဲ့သို့ သုပ်၍လည်း စားလေသည်။ "An appleaday,adoctor keeps away" ဟူ၍ ပြောဆိုပြီး တရွမ်းရွှမ်း သွားရည်ကျလောက်အောင် သူ့ကို စားပြလေသည်။ စားချင့်စဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူ မစားရဲပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် အချဉ်စားပြီးလျှင် မခံရပ်နိုင်အောင် သွားကျိန်းတတ်သောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။
အဆိုပါ ပင်မြင့်စံ ငါးလုံးပြွတ်မှ ပန်းသီးတစ်လုံး နှင့် နှစ်လုံးပြွတ်မှ ပန်းသီးတစ်လုံးတို့အား အိမ်ရှင်အဘိုးကြီး ခူးဆွတ် စားသောက်မည်လား၊ သို့မဟုတ် အခြားသူ တစ်ယောက်ယောက်ကများ လာရောက် ခူးဆွတ် စားသောက်မည်လား အတိအကျ မပြောနိုင်ပေမဲ့ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်တွင်မူ "ပွင့် သီး မှည့် ကြွေ" ဟူသည့် သဘာဝနိယာမ အတိုင်း ထိုလက်ကျန် နှစ်လုံးတို့သည်လည်း မြေခကြွေကျပြီး ဘ၀ ဇာတ်သိမ်းရမည်မှာ သေချာလှပေတော့သည်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 03:00 17 comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:58 19 comments:
အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ပေးပို့လာကြသည့် သ၀ဏ်လွှာတို့အား ဒိုင်လူကြီး သုံးဦး တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန် စစ်ဆေးနေကြသည်။ ကင့်မွန်နဲ့ ပို့ခဲ့သည့် သ၀ဏ်လွှာက ၂၆ စောင်။ အေးမီးနဲ့ ဆက်သခဲ့သည့် သ၀ဏ်လွှာက ၁ စောင်။ စောက်ဘီနဲ့ ပါးပေးခဲ့သည့် သ၀ဏ်လွှာက ၁ စောင်။ စုစုပေါင်း သ၀ဏ်လွှာ ၂၈ စောင် တိတိ ဖြစ်သည်။ ဒိုင်လူကြီး သုံးဦးက ထိုသ၀ဏ်လွှာ ၂၈ စောင်ထဲမှ အကောင်းဆုံး သ၀ဏ်လွှာအား ရွေးချယ် ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထို အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီး သုံးဦးမှာ အခြားသူများ မဟုတ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို သမာသမတ်ကျကျ ဘက်မလိုက်ဘဲ ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်း၌ နာမည်အလွန်ကြီးကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး သုံးဦးပင် ဖြစ်လေသည်။ ထို သူတို့မှာ.......
၃။တုံးဖလား သူကြီးမင်း ဟူ၍ ဖြစ်လေသည်။
ထိုဒိုင်လူကြီး သုံးဦးတို့၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ "ငယ်ရွယ် တက်ကြွ စန်းပွင့်" ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်နဲ့ လုံးဝညီညွတ်သည့် သ၀ဏ်လွှာတစ်စောင်အား အကောင်းဆုံး သ၀ဏ်လွှာ အဖြစ် ရွေးချယ် သတ်မှတ်ပေးမည် ဖြစ်၏။ ထိုဒိုင်လူကြီး သုံးဦးတို့သည် အောက်ပါ သ၀ဏ်လွှာတို့အား တစ်စောင်ပြီး တစ်စောင် တစ်လှည့်စီ သေချာ စစ်ဆေးပြီး မှတ်ချက်ပေးနေကြလေသည်။ သ၀ဏ်လွှာအားလုံး အကောင်းတွေချည်းမို့ ပို၍ သတိထား စစ်ဆေးနေကြရသည်။
Happy Birthday ပါ သူကြီးမင်း ဦးကိုကိုမောင်း) မွေးနေ့သာမက နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေရှင်။
Wednesday, 10 August 2011 14:54:00 GMT+01:00
ခေါ်ရက်လိုက်တာ။ ဦးကိုကိုမောင်တဲ့။ အသက်တောင် တစ်ရာလောက် ထပ်ကြီးသွားသလား အောက်မေ့လိုက်ရတယ်။း)))
HAPPY BIRTHDAY.. ပါ ကိုမောင်ရေ...
မွေးနေ့မှ“စ”..နှစ်တရာတိုင် အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝနိုင်ပါစေရှင်..
Wednesday, 10 August 2011 14:57:00 GMT+01:00
ကိုမောင်ရေတဲ့။ သူလေးကတော့ သိပ်မဆိုးဘူး။ စကာတင် ရွေးမယ်ဆို ရွေးလို့ ရတယ်။း)))
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့
ပါစေ တဂျီးမင်းရေ...၊ဒါနဲ့စကားမစပ် ကြောင်ဖမ်းဆရာ
Wednesday, 10 August 2011 15:19:00 GMT+01:00
တဂျီးဖြစ်လိုက် သူကြီးဖြစ်လိုက်နဲ့မို့ မောင်လေးကိုလဲ ရှောင်ပြေးလိုက်ရတယ်။ :D :D :D
happy birthday သူကြီးမင်း........
( လူပျိုကြီးစာရင်းဝင် နေပြီဆိုတော့ အနည်းဆုံး ငှက်ပျောပင်ကတော့ မျက်စောင်းထိုးမှာပဲ}}}}:)
ကိုယ့်လုပ်စာ ကိုယ်စားပြီး နေရင်းထိုင်ရင်းက ငှက်ပျောပင်
Wednesday, 10 August 2011 15:40:00 GMT+01:00
ငှက်ပျောပင် ငှက်ပျောတုံးကြီး လာထိုးပေးလို့ မင်းဧရာကိုလဲ စိတ်နာနာနဲ့ ဘဲ။ ဟာ ဟ။
သူကြီးမင်း ရယ် ..
သူကြီးမင်းကို လည်း အဲ့လို
ကုသိုလ် အရမ်းရစေချင်တာပဲ ..
အဲ့ဒါကြောင့် အဲ့လို ကုသိုလ်
လုပ်ချင်စိတ် များ ရှိရင်
ဒီကို ကြွမြန်းခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ..
ကဲ မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ် ..
မွေးနေ့မှာ သူများကို ကုသိုလ်ပေးရင်း
ကုသိုလ် ယူနိုင်ပါစေလို့ ... xDxD
Wednesday, 10 August 2011 16:37:00 GMT+01:00
သူလေးလဲ သူကြီးမင်းလို့ ခေါ်ဝေါ်ပြီး ကုသိုလ်တွေ အတင်းပေးနေလို့ ။း)))
ကပ်စီးနည်းကြီးလို့ မပြောပါဘူးလေ. .
ပျော်ရွှင်စွာ မွေးနေ့လေးတွေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကျင်းပနိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ် :D
Wednesday, 10 August 2011 17:37:00 GMT+01:00
အာဘွားဆရာကြီးကိုလဲ အချက်နဲ့ သိပ်မညီလို့ အာဘွားပြန်မလုပ်လိုက်နိုင်ဘူး။း))))
Happy Birthday ပါ။ သူကြီးမင်းရေ။ ခုရောက်ဆဲ အသက်......မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများတိုင်အောင် ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း၊ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပြီးသကာလ ဟာသပိုစ်များကိုလည်း ခဏခဏတင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွယ်။ (ဘုန်းဘုန်းမွေးနေ့တုန်းက မောင်သူရလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ မတွေ့လိုက်ရတာ နာတာပဲ)
Wednesday, 10 August 2011 17:45:00 GMT+01:00
ဘုန်းဘုန်းတောက်လဲ အသက်...... ဆိုပြီး ပေယျာလကန်ထိုးထားလို့ စာဖတ်သူတွေ ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ။ ဟာ ဟ။
သူဂျီးမင်းမပြောပေမဲ့ သိတယ် သိတယ်
ဆံပင်ဖြူတာ လူသိမှာစိုးလို့ အသက်မပြောတာများ ဟင်းဟင်း
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာပြီး ဆန္ဒအားလုံး ပြည့်ဝပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ..
Wednesday, 10 August 2011 17:49:00 GMT+01:00
အမလေးးးးး အန်တီချောရယ်။ ၄၅ နှစ်တဲ့။ ပြောရက်လိုက်တာ။ ဧကန္တ အန်တီချောက အခုမှ ဗုဒ္ဓ၀င် ဖတ်ပြီးခါစနဲ့တူတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်ရဲ့ ၀ါတော် ၄၅ ၀ါကို စွဲလန်းပြီး ၄၅ နှစ်လို့ ပြောတာ ဖြစ်မယ်။ ၄၅ ဆိုတော့။း))))
Happy Birthday ပါအကိုရေ ပျော်ရွင်ဖွယ်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ချစ်သော မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွင်ပါစေလို့....လူပျိုးကြိးဘဝ ကလဲ မြန်ဆုံး ကျွတ်လွတ်ပါစေလို့...:P အဟီးးးးး မချောပြောတယ် မှန်တယ်မလားအကို ၄၅ နှစ်တဲ့ ဟိဟိ..:)
Wednesday, 10 August 2011 20:54:00 GMT+01:00
ညီမလေး အိမ်ဂျယ်ကိုလဲ အန်တီချောကို ထောက်ခံသလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ။း)))
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး လိုအပ်သောဆန္ဒတွေကို လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အောင်မြင်ပါစေ။ မိဘကိုလုပ်ကျွေးပြုစုနိုင်သော သားကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်ပါစေ။
Wednesday, 10 August 2011 22:01:00 GMT+01:00
အင်း... မဆိုးပေဘူး။ နောက်ဆုံးအပိုဒ်မှာ သားကောင်းလေး ဆိုတဲ့ စာလုံးပါတယ်။ ငယ်ရွယ်မှုကို ဖော်ပြနေတယ်။ စကာတင် ရွေးမယ်ဆို ရွေးလို့ရတယ်။း))
Happy birthday young at heart,
So many decades, where to start?
With energy, like that pink bunny,
You make us look lazy, that’s not funny!
Never-ending old school ways,
Filled with stories, to Amaze!
Listening has been lost with age,
You belong on theatre stage.
If you manage to forget,
We’ll remind you, don’t you fret.
Smile with joy, you old fart.
Wednesday, 10 August 2011 23:02:00 GMT+01:00
Young ဆိုတဲ့ စာလုံးလေး ပါလို့ သူ့ကိုလဲ စကာတင်တော့ ထည့်လိုက်မယ်။
တုံးဖလားရွာကို အပိုင်စားရတော်မူပေထသော သဂျီးမင်း၏ အသက် ၈၀ ပြည့် မွေးနေ့မှသည် အသက်ရာကျော်ရှည်၍ ရပ်ကျိုး ရွာကျိုး ဘာသာ သာသနာအကျိုး စွမ်းစွမ်းတမံ သယ်ပိုးရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေ ... ။
သြော် ဒါနဲ့ နောက်တခါ ပန်းသီးဘုရားကပ်ရင် တံဆိပ်တော့ ခွါပါ သဂျီးရယ်။ မြတ်စွာဘုရား ဘုဉ်းပေးတဲ့တခါ တံဆိပ်ကြီး ပါသွားပါအုံးမယ်။
Wednesday, 10 August 2011 23:16:00 GMT+01:00
အမလေးးးး အသက် ၈၀ ဆိုပါလား။ ဘုရားရှင်ရဲ့ သက်တော် ၈၀ နဲ့ မှားတာဘဲ ဖြစ်ရမယ်။ သူလဲ အခုမှ ဘုရားစာတွေ ဖတ်လာတာ ဖြစ်မယ်။ ငါ့နှယ်နော်။ ခက်ပါ့။ အဲ... ဒါပေမဲ့ အသက် ၈၀ မှ တစ်သက်ချစ်မယ် ဆိုတဲ့ သူတွေ ပေါ်လာရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။း))) ပြီးတော့ ပန်းသီး တံဆိပ်မခွါတာကိုလဲ မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်သေး။ တကထဲ သူစားမှာ ကျနေတာဘဲ။ ဘုရား ဘုဉ်းပေးမှာဘဲကို။ ဘုရားမှာ သမန္တစက္ခု ရှိတော်မူတာ သူ မသိရှာဘူး ထင်ပါ့။း)))
Wednesday, 10 August 2011 23:34:00 GMT+01:00
ရိုးရိုးလေးဘဲ ဆုတောင်းပေးလို့ တိုးတိုးလေးဘဲ သူ့ကိုလဲ ။း)))
သူဂျီး (HAPPY BIRTHDAY)
အခုမှ အသက်၁၂၀တိုင် ဘေးဘယာကင်းကွာပြီး ဆက်လက် (ဘယာကြော်စား အဲ ဘလော့ကာများကြား ဘလော့လည် ဘလော့ဖတ် ဘလော့ရေးရင်း) စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ ရွှင်လန်းပါစေလို့..
Thursday, 11 August 2011 03:47:00 GMT+01:00
အမ လသာညလဲ ဘယာကြော်ဘဲ စားခိုင်းနေလို့ ဒိုင်လူကြီးက ဘယာကြော်ပြတ်နေလို့ တဲ့။း)))
ဟီးဟီး.. ဆွမ်းတော်ကပ်တာ ပန်းသီးမှ ပါပါ့မလားလို့.. ဟားဟား.. ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ... သွားကြီးရေ.... ဒီမွေးနေ့အလွန်မှာ စွံပါစေ.... :D
Thursday, 11 August 2011 03:58:00 GMT+01:00
ဟင်းးးးးးးးးးးးးး သွားကြီးတဲ့။ ပြီးတော့ စွံပါစေတဲ့။ မစွံတာ ကျနေတာဘဲ။ ။း))
Happy Birthday ပါ သူကြီးမင်း...
Thursday, 11 August 2011 04:04:00 GMT+01:00
ရိုးရိုးလေး ဆုတောင်းတော့လဲ တိုးတိုးလေးဘဲ ပြောလိုက်ချင်တယ်။ နေကောင်းလားလို့။း)))
Thursday, 11 August 2011 07:56:00 GMT+01:00
အင်း... မောင်ဘကြိုင်ကိုတော့ စဉ်းစားရမယ်။ လေးငါးယောက်ဆိုလားဘဲ။ ဒါပေမဲ့ တပြွတ်ကြီးက ပါလာသေးတယ်။ စကာတင်တော့ ထားပေးလိုက်ပါ့မယ်။း)))
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့မွေးနေ့ပါ 'ကိုကိုမောင်'။
မွေးနေ့မှာ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားကို သွားရောက်ဖူးခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာထံမှာ ကပ်လှူခဲ့တဲ့ ဆွမ်း သစ်သီး ပန်းတို့ကြောင့် လောကီလောကုတ္တရာ နှစ်လီနှစ်ဝ လိုအင်ဆန္ဒ အဖြာဖြာပြည့်ဝကာ ကြံတိုင်းအောင်လို့ ဆောင်တိုင်းလည်းမြောက်ပါစေကွယ်။
သတိတရပြောခဲ့အုံးမယ် ယောက်ျားလေးတွေအတွက် ကြင်ယာရှာရင် 'ဒွေးချိုးလေးတိုး' တဲ့နော်း))
Thursday, 11 August 2011 08:49:00 GMT+01:00
ပထမအပိုဒ်ဆုတောင်းလေး ကောင်းပေမဲ့ ဒုတိယအပိုဒ်က ဒွေးချိုးလေးတိုး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ အသက်ကြီးတာကို ရည်ရွယ်နေတာကြောင့် အန်တီတင့်ရေ။း)))
သူကြီး ကတော့ မွေးနေ့ ကိုတောင် သူ့သူငယ်ချင်းကို ဧည့်ခံခိုင်းတာကိုး။
Happy Birthday up to 120years age !
Thursday, 11 August 2011 10:02:00 GMT+01:00
စောက အသက် ၁၂၀ ထိ နေခိုင်းတယ်။ လက်ရှိ အရွယ်ကို ထည့်မပြောဘူး။း))
့Happy Birthday.ပါ သူကြီးမင်းရှင့်..
Thursday, 11 August 2011 13:05:00 GMT+01:00
သူကြီးမင်းလို့လဲ ခေါ်သေး။ သူ့ကိုသူတော့ ညီမလေးတဲ့။း)) တကယ်လို့ မိမဲလေး အသက်က ၃၅ ဆိုရင် မွေးနေ့ရှင်လဲ အလိုလို အသက်ကြီးသလို ဖြစ်သွားရော။း))
သြော် သူကြီးမင်းလည်း Leo ဖွားဘဲလား။ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေလို့ တောင်းဆုချွေပါရစေရှင်။
Thursday, 11 August 2011 13:45:00 GMT+01:00
(လည်း)ကို ထောက်ဆပြီး မအ်ိမ်သူကလဲ လီယိုဘွားဘဲ ဖြစ်ရမယ်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း ဆုတောင်းပေးလို့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မထိဘဲ ဖြစ်နေတယ်။း)))
အင်း...တုံးဖလား သူကြီးတို့များ ပါရမီထူးချက်ကတော့ မွေးနေ့တောင် ကိုယ့်အိတ်ထဲက ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါး မထွက်ရှာပေပဲကိုး...အနှီလိုမွေးနေ့မျိုးကတော့ ဝေါင်ဝေါင်ရှေးပါသဗျား...ဟား ဟား...နောက်တာပါဗျာ...ဘိလပ်မှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်နေတယ်ကြားတာကြောင့် စိတ်ပူနေတာ အခုလို အပြင်ထွက်ပြီး ၀ါးတီးတွေဘာတွေ ဖွင့်နေသဟာဖြင့် စိတ်ပူနည်းနည်းတော့ သက်သာသွားသဗျ...
အစ်မမေပြောသလို ပန်းသီးလေးတွေကိုတော့ တံဆိပ်ခွာပြီးမှ ဘုရားကို ကပ်သင့်ပေသပေါ့ဗျာ...ခြံထွက်မဟုတ်ဘဲ ဆိုင်ကခူး..အဲလေ..၀ယ်လာမှန်း ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ရင်း လျှောက်လိုက်ရင်လည်း ရသားနဲ့...ဟား ဟား...
မွေးနေ့ကို နောက်ကျမှ ရောက်ပေမယ့် မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာတော့ လက်ဖွဲ့လိုက်ပါသဗျား ( ဟ...မင်္ဂလာဆောင်နဲ့မှားသွားပြီ...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရောကြိတ်လိုက်တာပေါ့ မပိုင်လား...)
မွေးနေ့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တော့ မပြောကြေးဗျာ...တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အိုဖို့ပိုနီးလာတာမို့ ကြိုပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်တာမို့ပါ...
Thursday, 11 August 2011 14:41:00 GMT+01:00
ဆရာဟန်ကြည်ကတော့ အသက်ရှည်တာရော မာတာရော ပြီးတော့ မဒီကညာ သိန်းထောင်ရာ တဲ့။ ကောင်းတော့ ကောင်းတောင်းတောင်း။ ဒါပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင် တစ်ယောက်ထဲသော မဒမ်ကို ကြောက်နေရသူဆိုတော့။ ဆရာ.. ကိုယ်ချင်းမစာမနာ မွေးနေ့ရှင်ကို တစ်စစီ ဖြစ်အောင် လုပ်ရက်တယ် ထင်ပါ့။း))) ဒါပေမဲ့ စကာတင်တော့ ထားလိုက်ပါတယ်။ ဟာ ဟ။
Happy Birthday ပါ သကြီးမင်း ရေ
ကျန်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမတ္တာပို့ရင်း နဲ့ နောက်တနှစ် မဟိုင်းပါစေကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်
Thursday, 11 August 2011 14:54:00 GMT+01:00
အမရွှေစင်က နောက်တစ်နှစ် မဟိုင်းစေကြောင်းတဲ့။ ဒါဖြင့် ဒီနှစ်တော့ ဆက်ဟိုင်းဦးပေါ့ ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။း)))
ဟက်ပီးသော ဘာ့သ်ဒေးပါ တုံးဖလားရွာသဂျီးရေ....။ မေဓါဝီ ပြောသလိုပဲ ပန်းသီးပေါ်က တံဆိပ်လေးများလည်း ခွာပါဦး။ အမတို့ ဘလော့ဂ်ဂါတွေကိုတော့ တွေ့တဲ့အခါ မြန်မာစတိုင်မွေးနေ့လေး လုပ်ပေးဖို့ အကြွေး မှတ်ထားလိုက်ပြီ ဒါပဲ...
Thursday, 11 August 2011 15:24:00 GMT+01:00
အမချစ်ကြည်အေးလဲ မြန်မာစတိုင်လ်မွေးနေ့လုပ်ပေးပါတဲ့။ သူကဖြင့် ဂျပန်စတိုင်လ် ကျင်းပမေးမယ် မဟုတ်ဘဲနဲ့။း)))
သူဂျီးမင်းရဲ့ 18 နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှ သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာဖြင့် ဘ၀လမ်းကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ ဘိုနိုင်ငံရောက်သော်လည်း မြန်မာ့စိတ်နှင့် သာသနာ ချစ်စိတ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေသတည်းးးးး။
Thursday, 11 August 2011 16:15:00 GMT+01:00
အဲ... အလဲ့။ ၁၈ နှစ်ဆိုပါလား။ တယ်တော်တဲ့ မိုးယံ။း)))
တော်ပါသေးဗျာ ကိုယ့်တို့ တုံးဖလားသူကြီးဘာမှမဖြစ်
Thursday, 11 August 2011 17:38:00 GMT+01:00
မောင်ဂျစ်တူးက တိတ်တိတ်ကလေး ကျင်းပတာကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေပုံရတယ်။ သူ့မွေးနေ့ဖြင့် မပြောဘဲနဲ့။း)))
ကဲ... ကင့်မွန် သယ်ဆောင်လာတဲ့ သ၀ဏ်လွှာတွေတော့ စစ်ဆေးပြီးပြီ။ စောက်ဘီ ယူလာတဲ့ ကွန်မင့်လေးကို ကြည့်ကြဦးစို့ရဲ့။ ဘာတဲ့။
12 Aug 11, 05:30
အင်္ဂါဟူး: ဟတ်ပီးဘတ်ဒေးပါ သူဂျီးမင်း ရွာသားများနှင့်တစ်ကွ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေသတည်း။
အင်္ဂါဟူးက အင်္ဂါမဟုတ် ဗုဒ္ဓဟူးမဟုတ်နဲ့ နာရီကို ခွမွေးထားတာ ဖြစ်ရမယ်။း))) ရွာသားများနဲ့ဘဲ အတူတူ နေခိုင်းရက်တယ်။ ရွာသူတွေဆို တော်သေးးးးးး။
ခွန်= Happy Birthday... နော် တဲ့။
ရိုးရိုးလေးပါဘဲ။ အဆန်းအပြားမပါဘူး။း)))
ဒိုင်လူကြီး သုံးဦးသည် သ၀ဏ်လွှာများကို မမောနိုင် မပန်းနိုင် စစ်ဆေးကြပြီးနောက် စကာတင် အကြမ်းဖျင်း သ၀ဏ်လွှာ ခြောက်စောင်အား ရွေးချယ်လိုက်ကြလေသည်။ ထို သ၀ဏ်လွှာ ခြောက်စောင်တို့မှာ..
၁။ အဖြူရောင် နတ်သမီး
ထိုစကာတင် သ၀ဏ်လွှာ ခြောက်စောင်တို့အား ထပ်မံ၍ စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ကြလေရာ "ငယ်ရွယ် တက်ကြွ စန်းပွင့်" ဟူသည့် အချက် သုံးချက်လုံး ပြည့်စုံသည့် သ၀ဏ်လွှာ မရှိဘဲ ဖြစ်နေလေသည်။ ငယ်ရွယ် ဆိုသည့် အချက်နဲ့ ကိုက်ညီသော်လည်း စန်းပွင့် ဟူသည့် စံနဲ့ မညီ၊ စန်းပွင့်ဆိုသည့် စံနဲ့ ကိုက်ညီသော်လည်း ငယ်ရွယ် တက်ကြွ ဟူသည့် စံတို့နဲ့ မညီဘဲ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရလေသည်။
ထို့ကြောင့် မွေးနေ့ရှင်ကို တိုင်ပင်ကြည့်ရာ အချက် သုံးချက်လုံး မညီညွတ်လျှင် ပထမနှင့်ဒုတိယ အချက်တို့နဲ့ ညီညွတ်သည့် သ၀ဏ်လွှာအား အကောင်းဆုံး သ၀ဏ်လွှာအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် အဆိုတင်ပြမှုကို လက်ခံရရှိကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဖိုင်နယ် ဒီဇစ်ရှင်းကို အထက်ပါ ဒိုင်လူကြီး သုံးဦးမှ တညီတညွတ်ထဲ ချမှတ်လိုက်လေသည်။ အကောင်းဆုံး သ၀ဏ်လွှာမှာ.... ငယ်ရွယ်မှုကို ထင်ဟပ်စေသော၊ ကိုယ်ကျန်းမာမှု၊ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ဖော်ပြသော၊ မြန်မာချစ်စိတ်ကို လှစ်ပြသော၊ သာသနာချစ်စိတ်ကို နိုးဆွစေသော အဖိုးတန်တဲ့ မိုးယံရဲ့ သ၀ဏ်လွှာပင် ဖြစ်ချေတော့သည် တမုံ့။ ။း))))
ပျော်စေလိုလို့ အခုလို ရေးလိုက်တာပါ။ မွေးနေ့ အတွက် ကွန်မင့်ပေးကြ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူများ အားလုံးကို အထူး (အထူး) ကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်။ တကယ်ကို ချစ်ခင်တွယ်တာ ကျေးဇူးတင်တာပါ။ အခုလို ရေးလိုက်တဲ့အတွက် ကာယကံများကို တစ်ခုခု မကြိုက်မနှစ်သက်စရာ ဖြစ်သွားစေရင် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ ။
တစ်လက်စထဲ သတင်းပါးလိုက်ပါရစေ။ မကြာမီ ရက်အတွင်း ကြောင်ဖမ်းဆရာတော် ဇာတ်သိမ်းပိုင်း တင်ပါတော့မယ်။ အပြီးသတ် ရေးပြီးပါပြီ။ စိတ်မ၀င်စားရင်တောင်မှ အားနာပါးနာလေး လာရောက် အားပေးကြပါဦးလို့။ ။
အားလုံးကို ချစ်ခင် ခင်မင် လေးစားလျှက်
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 14:49 16 comments:
ပြောနေကြပြီ။ ဘာတဲ့။ မွေးနေ့ဆိုလားဘဲ။ ဟုတ်ပါ့။ ဘိလပ်မှာ ဒီလောက် ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက် ဖြစ်နေရတဲ့အထဲ မွေးနေ့က လာတိုက်ဆိုင်နေသေးတယ်။ ဒါကြောင့် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကလေး နေမလို့ဟာ။ သိတဲ့သူတွေက သိနေကြတော့ ငြိမ်နေလို့ မရတော့ဘူး။ တုံးဖလားသူကြီးမင်း မွေးနေ့တဲ့ဗျား။ ဘယ်နှစ်နှစ်ပြည့်လဲဆိုတာ မေးလို့လဲ မရဘူး။ ပြောမပြဘူးတဲ့။း))) ဘယ်လိုစစ်စစ် မပြောဘူး ဆိုတာချည်းဘဲ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ အားနာပါးနာလေးတော့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ကြပါဦး။ သူ့ခမျာ သနားစရာ။ စိတ်ပါလက်ပါ ဆုတောင်းပေးမဲ့ သူက မရှိသလောက်ဆိုတော့။
ဘာကျွေးမှာလဲတဲ့။ ဘာမှတော့ ထူးထူးထွေထွေ ကျွေးစရာ မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဆိုတော့ နတ်သမီးလေးဆီလဲ အကြောင်းမကြားလိုက်တော့ဘူး။ သူ့ဆီ ကြိုတင် အကြောင်းကြားထားရင်တော့ သူက အကျွေးအမွေးဝါသနာ အပါသား။ ဒါပေမဲ့ ရှိစေတော့။ လူတွေ ခဏခဏ တစ်နှစ်တစ်နှစ် အသက်ကြီးကြီးလာတာနဲ့ သူခမျာလဲ ပင်ပန်းရှာလှပြီ။ ဒီတော့ ဒီနေရာလေးမှာဘဲ သွားပြီး စားချင်တာ သွားစားကြပေတော့ဗျို့။ ဟာ ဟ။ စော်ကားတာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ စေတနာပိုသွားတာ။း)))
မနက်စောစော ဘုရားမှာ ပန်းနှင့် သစ်သီးဆွမ်းလေးတော့ ကပ်လှူဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အပြင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘူဖေးသွားစားကြတယ်။ စတိန်းလမ်းပေါ်က ရှန်ဟိုင်းဘူးဖေးဆိုင်မှာ သွားစားကြတာ။ စုစုပေါင်း လေးယောက်။ ထင်ကြမှာ ထင်ကြမှာ သေချာတယ်။ သူကြီးမင်းက ဘူဖေး ဒကာလို့။ လုံးဝ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ မောင်သူရဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က သူကြီးမင်းရဲ့ ကုသိုလ်ကို အတင်းအဓမ္မဓါးမြတိုက်ယူသွားတယ်။ သူဘဲ စီလီဘရေးရှင်း လုပ်ပေးချင်လို့တဲ့။ အဟမ်းးး ရှိစေတော့ ရှိစေတော့။ လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ သူတစ်ပါး စေတနာဆိုတာ ဖျက်ဆီးကောင်းတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ သူ့ကားနဲ့သွားတယ်။ သူ့ကားနဲ့ဘဲ ပြန်လာတယ်။ ကားပါကင်အတွက် သူဘဲပေးတယ်။ အစားအသောက်အတွက် သူဘဲပေးတယ်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းအတွက် တစ်ပ်မန်းနီးကို သူဘဲပေးတယ်။ ပေါင် လေးဆယ် ငါးဆယ်လောက်ကြီး သူ ကုသိုလ်ရသွားတယ်။ သူကြီးမင်းက သူနှင့် မပြိုင်လိုလို့ သူက ပြိုင်ဘက်မရှိ ကုသိုလ်တုံးကြီး ပိုက်ထွေးခွင့် ရသွားတယ်။
မြန်မာမှာ နေစဉ်တုန်းက ဂျပန်မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ သူက သူ့မွေးနေ့ဆို မြန်မာစတိုင်လ်နဲ့ ကျင်းပတယ်။ သူကြီးမင်းမွေးနေ့ဆိုရင်တော့ ဂျပန်စတိုင်လ်လို ကျင်းပပေးတယ်။ မြန်မာစတိုင်လ်ဆိုရင် မွေးနေ့ရှင်က သူငယ်ချင်းတွေကို ပြုစုရတာ မဟုတ်လား။ ဂျပန်စတိုလ်ဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေက မွေးနေ့ရှင်ကို စီလီဘရေးရှင်းလုပ်ပြီး ပြုစုပေးကြတာတဲ့။ သူ ပြောပြတာပါ။ ဒါကြောင့် သူကြီးမင်းကတော့ အဲဒီဂျပန်နဲ့ ဟန်အရမ်းကျခဲ့တယ်။း)) အခုလဲ သူငယ်ချင်း မောင်သူရက သူဘဲ ပြုစုချင်တယ်တဲ့။ သူကြီးမင်းက အရမ်းအားနာတတ်တော့ မငြင်းလိုက်တော့ဘူး။ သူပြုစုတာကိုဘဲ ၀ိုင်းဝန်းအားပေးလိုက်ကြတာပေါ့။
ဘူဖေးသွားစားတဲ့ စတိန်းဟိုက်စထရိ(တ်) ။ လူတွေ အေးအေးဆေးဆေး သွားသွားလာလာပါဘဲ။ ဘာမှ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ညဘက်ဆိုရင်တော့ နဲနဲတော့ သတိထားနေရမယ်ထင်တယ်။
သူငယ်ချင်းမောင်သူရ ကျွေးတဲ့ ဘူဖေး။ ကြိုက်သလောက်စား။ အကောင်းစားတွေချည်းဘဲ။
အဲဒီပုံစံမျိုး နှစ်ပွဲတိတိ သူငယ်ချင်းအလှူကို အားပေးလိုက်တယ်။း)))
ဟင်းရည်သောက်ချင်ရင်လဲ ကြိုက်သလောက် သောက်ဘဲ။
မောင်သူရတစ်ယောက်ကတော့ ၀မ်းသာသွားမလား နောင်တရသွားမလား မသိဘူး။ အဟီးးး။ ပြီးတော့ အဲဒီ ပန်းကန်ပြားထဲမှာ တစ်(ပ်) ချန်ထားခဲ့ရသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောရဲတာကတော့ သူ တော်တော်လေး ကုသိုလ် ရသွားမှာ အသေအချာဘဲ။ စားသောက်ပြီး မထနိုင်ဖြစ်တော့မလို့။ သိတဲ့အတိုင်း တုံးဖလားသားလေ။ တန်အောင် စားခဲ့တယ်။ ဟာ ဟ။ ဦးလေး အဒေါ် အကို ညီ အမ ညီမ တူ တူမများလဲ ရှိတာလေး စားသွားလိုက်ကြပါဦး။ ပြောကြမှာတော့ သေချာတယ်။ သူကြီးမင်း ကပ်စေးနှဲကြီးလို့။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 14:38 31 comments: